ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များကို အမေရိကန် ဒုလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ့ဆုံ | Saffron People's Movement
December 12, 2010 in သတင်းပဒေသာ
Early Head Start serves Infants ToddlersAges 6wks-3yrs Pregnant Women TeensHS EHS isafree child development program for children and their families. Families usually meet financial eligibility requirements or have special needs.
« Good News in the Face of Attacks; 17 Multiethnic Relief Teams Graduate and Go on Relief Missions in Burma 2010
နှစ်အတော်ကြာအတွင်း ပထမဆုံး ဂျပန် အဆင့်မြင့်အရာရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ »